Izitsha ezi-7 ezijwayelekile zaseMexico okufanele uzame | Izindaba Zokuhamba
Izitsha ezi-7 ezijwayelekile zaseMexico okufanele uzame
Luis Martinez | 28/04/2021 13:28 | Gastronomy, I-México
Ukukhuluma ngokudla kwaseMexico, okokuqala, ukukhuluma nge-gastronomy ehlukaniswe njenge Amagugu Amasiko Angaphatheki Wobuntu ngu-UNESCO. Lesi simo sizokunikeza umbono wokubaluleka nokunotha kweMexico ngokwezitsha zayo nokuthi kungani sikulethela lokhu kukhethwa kwezitsha ezi-7 ezijwayelekile zaseMexico ongeke uziphuthe.
Eqinisweni, sibhekene nelinye lamakhishi ahlukahlukene kakhulu emhlabeni, zombili ngokwezithako zalo nangokuyahlukahluka kwezitsha zalo. Singasho ukuthi izwe ngalinye ngisho nedolobha ngalinye linekhishi lalo. Kodwa-ke, sizokhuluma nawe ngokudla okujwayelekile kwaseMexico ngomqondo ojwayelekile, okungukuthi, kwalabo izindlela zokupheka ezivamile ezweni lonke.
1 Ukudla okujwayelekile kwaseMexico: Umlando omncane
2 Izitsha eziyisikhombisa ezakha ukudla okujwayelekile eMexico
2.2 Ama-Burritos nama-fajitas
2.3 Imvukuzane, okunye okudala phakathi kokudla okujwayelekile eMexico
2.4 Ingulube encane uPibil
2.5 Ama-Escamoles nezintethe
2.7 Ama-dessert: uswidi kabhontshisi
Ukudla okujwayelekile kwaseMexico: Umlando omncane
I-gastronomy yamanje yaseMexico ingumphumela we ukuhlanganiswa kwe-substrate yangaphambi kweColombia kanye nefa laseSpain. Ama-African, Asia, Middle East kanye namathonya aseFrance engezwe kulokhu. Kusukela emhlabeni wangaphambi kweSpanishi uthathe izithako zawo eziningi. Ngokwesibonelo, ummbila, upelepele, ubhontshisi, utamatisi, ukwatapheya nezinongo eziningi ezifana i-papalo, i-epazote noma iqabunga elingcwele.
Kepha bonke bajoyinwa yilabo abavela eYurophu njenge ukolweni, irayisi, ikhofi namakhambi anamakha anjenge i-bay leaf, ikhumini, i-oregano, i-spearmint noma i-coriander. Baze beza nabaseSpain inyama efana nengulube noma inkukhu y izithelo ezifana ne-orange, ulamula noma ubhanana.
Njengoba sikutshelile, umphumela wakho konke lokhu yikhishi elimakwe ukwahluka phakathi kwezifundazwe ezahlukahlukene ezakha izwe lama-Aztec. Akufani ukukhuluma nge-gastronomy yeBaja California kunokukwenza ngeChiapas uqobo. Kepha konke ukudla okujwayelekile eMexico kunesisekelo esifanayo. Singasho ukuthi konke kususelwa kuzithako ezifana ummbila, upelepele nobhontshisi, futhi ngokuqinisekile amasu okupheka lokho kufana.
Izitsha eziyisikhombisa ezakha ukudla okujwayelekile eMexico
Izinhlobonhlobo eziningi zokupheka ezakha ukudla kwaseMexico kwenza kube nzima ngathi ukuzifingqa endatshaneni eyodwa. Ngakho-ke, sizogxila ezitsheni eziyisikhombisa ezijwayelekile ongazithola kunoma iyiphi indawo yezwe, kusuka Sonora up Veracruz (siyakuvumela lapha umhlahlandlela walo muzi) futhi kusuka Jalisco up Quintana Roo. Ngakho-ke, sizokwethulela isiphakamiso sethu se-gastronomic esivela eMexico.
Tacos del umfundisi
Mhlawumbe bayipuleti ethandwa kakhulu waseMexico, kuze kube seqophelweni lokuthi seqe imingcele yayo futhi namuhla singatholakala noma kuphi emhlabeni. Zibaluleke kakhulu ekudleni kwezwe okwenziwe ngabantu bakhona setha imishwana nabo. Isibonelo, "ukuphonsa i-taco" kufana nokudla noma "lapho uthando lungekho, amanye ama-tacos al pastor."
Kuyathakazelisa ukuthi iresiphi yakho bekungeke kube lula ukuyilungisa. Ingabe mayelana ama-tortillas ommbila noma kakolweni ngaphakathi lapho kufakwa khona isithako. Futhi lapha kukhona inani lama-tacos ngoba, ngokuya ngalokho abanakho ngaphakathi, kuphakamisa izinhlobo eziningi zezitsha futhi banikezwa amagama ahlukile. Kepha ezimbili ezaziwa kakhulu yilezi:
Tacos del umfundisi. Sesivele sishilo ngabo, kepha manje sizokutshela ukuthi ziqukethe ini. Imvamisa, ukugcwaliswa kwayo kuyingulube yasolwandle, yize ingabuye ibe yinyama yenkomo. Le marinade ilungiswa ngezinongo, i-achiote kanye nomhlabathi obomvu obomvu. U-anyanisi, uphayinaphu kanye ne-coriander nawo ayangezwa, kanye nososo ohlukahlukene.
Ama-tacos egolide. Endabeni yabo, ukugcwaliswa kwenziwa ngenyama yenkukhu eshisiwe, ubhontshisi namazambane. Athosiwe ngale ndlela bese kufakwa ushizi ogayiwe, ulethisi nesosi. Kwezinye izindawo, ziyadliwa zihambisana nenye isosi eluhlaza noma umhluzi wenkukhu lapho zifakwe khona.
IBurritos, okwakudala phakathi kokudla okujwayelekile eMexico
Yize ezinye izindlela zokupheka zingacatshangelwa, zisenjalo ama-tacos agxishiwe kwemikhiqizo ehlukile. Imvamisa zenziwa ngezinhlobo ezahlukene zenyama, upelepele, u-anyanisi nopelepele. Ngaphezu kwalokho, zivame ukuhambisana ne- ubhontshisi obusisiwe neminye imihlobiso.
Singakutshela okufanayo nge quesadillas. Futhi angamaqebelengwane ommbila, yize okucacile ukuthi ushizi uyingxenye yokugcwaliswa kwawo. Kodwa-ke, uma unesibindi sokuzama okuthile okwangempela, cela okukodwa okuphethe, ngaphezu kwezithako zendabuko imbali yethanga.
Imvukuzane, okunye okudala phakathi kokudla okujwayelekile eMexico
Ezweni lama-Aztec, noma yiluphi uhlobo lwesosi eyenziwe nge upelepele, upelepele nezinye izinongo ithola igama le- imvukuzane. Kulokhu kutholakala okwenziwa nge-avocado nalezo mifino. Njengoba kungenzeka uqagele, sikhulume nge guacamole, mhlawumbe usoso owaziwa kakhulu eMexico ngaphandle kwemingcele yawo. Njengokulangazelela, sizokutshela ukuthi isukela ezikhathini zangaphambi kweColumbian nokuthi kumaMayan, yayinophawu olumnandi.
Kodwa-ke, kulezi zinsuku, uhlobo oluthile lwesosi lubizwa ngokuthi imvukuzane elungelo ngqo lokudla okujwayelekile eMexico. Yiyo futhi eyenziwe ngopelepele kanye nezinye izinongo, kepha ine- ukubukeka okunoshokoledi. Ngokwandiswa, kubizwa nangokuthi inyama noma isitshulu semifino esenziwe ngale sauce.
Yize izwe ngalinye lineresiphi yalo, okwaziswa kakhulu eMexico yi imvukuzane poblano. Sekudume kakhulu kangangokuba, minyaka yonke, kugujwa ku- Puebla un umkhosi Kunikezelwe kule sauce. Yenziwe ngezinhlobo ezahlukahlukene zikapelepele, utamatisi, u-anyanisi, ugarlic, ushokoledi omnyama nezinongo. Uma uyizama, ngeke udumazeke.
Ingulube encane uPibil
I-Pibil igama lamaMaya ebelisetshenziswa ukubhekisa kunoma yikuphi ukudla okulungiselelwe ku kuhhavini womhlaba. Lokhu kwakwaziwa njenge pib futhi kulapho igama lalesi sidlo livela khona. Ekuqaleni, bekudumile kufayela le- Inhlonhlo yaseYucatan, izwe eliyigugu lapho ungavakashela esikuncomayo kule ndatshana. Kepha selisabalele kulo lonke elaseMexico nasemhlabeni wonke.
Okuqukethe ingulube yasolwandle ku-achiote, isipayisi esasetshenziswa futhi ezikhathini zangaphambi kweColombia. Ngemuva kwalokho ibekwa kuhhavini womhlaba noma okufanayo okuhambisana no-anyanisi onsomi, upelepele we-habanero no-orange omuncu. Konke lokhu kusongwe ngamaqabunga kabhanana ukuze kunganqabi futhi kushiywe kuphekwe ubusuku bonke.
Ngokunengqondo, lesi sidlo asisenziwa ngendlela yendabuko enjalo, kepha sisalokhu simnandi nje. Nge-sauce, hhayi kuphela ukungenelela kwe-achiote, i-oregano, ikhumini, uwoyela womnqumo, uviniga kanye nejusi elimuncu lewolintshi uqobo nalo lengeziwe.
Lesi sidlo sifaka phakathi kokudla okujwayelekile kwaseMexico ngoba kuyingxenye yako, kepha sikuxwayisa ngokuthi, mhlawumbe, awufuni ukukuzama. Isizathu silula. Ama-escamoles kukhona izibungu zentuthwane ezidliwa ezweni lama-Aztec kusukela ezikhathini zangaphambi kukaColombia. Uma sikutshela ukuthi nabo bayabizwa "I-caviar yaseMexico", ungathola umbono wokuthi baziswa kanjani. Imvamisa zidliwa zithosiwe futhi zihambisane namaqanda nezinongo ezifana ne-epazote.
Ngokwengxenye yayo, singakutshela okufanayo ngezintethe. Ingabe mayelana intethe encane Zibuye zidliwe zithosiwe, noma njengesidakamizwa noma ngama-tacos naku-quesadillas. Kunoma ikuphi, zombili zinconyelwa ulwanga olunesibindi.
Lokhu ngamandla induku Kubandakanya, ngaphezu komhluzi, izinhlamvu zommbila zezinhlobonhlobo zikakhokho, inyama yenkukhu noma yengulube nezinye izithako eziningi. Phakathi kwalokhu, isibonelo, u-anyanisi, ulethisi, iklabishi, isithombo, ukwatapheya, ushizi noma izingulube zengulube.
Futhi ukuthi ungazitholela wena izinhlobo eziningi pozole. Kodwa-ke, zonke ziwela ezigabeni ezimbili: the mhlophe, elula ngoba inommbila nenyama kuphela futhi okubabayo, inaba kakhudlwana futhi lokho kungaba nephunga elimnandi kakhulu.
Kumele futhi sibheke imvelaphi yayo ezikhathini zangaphambi kweSpanishi. Eqinisweni, igama layo livela kusiNahuatl tlapozonalli, okusho ukuthi "kubilisiwe" noma "kuyakhazimula", yize eminye imibono iphakamisa ukuthi igama lalo likweleta posoli, igama elivela olimini lwesiCahita elingahunyushwa ngokuthi "ukupheka ummbila."
Ama-dessert: uswidi kabhontshisi
Asikwazi ukuqeda ukuvakasha kwethu kokudla okujwayelekile kwaseMexico ngaphandle kokukhuluma ngama-dessert. Ezinye ziqondana nalabo esibaziyo ezweni lethu. Hhayi ngeze, sesivele sathi ukudla kwaseMexico kunengxenye eqinile yaseSpanishi. Kuyindaba ye- UChurros, the irayisi pudding, the fritters noma i mthoko, kufana nokugcinwa kwethu.
Kodwa-ke, amanye ama-dessert angabomdabu beqiniso. Enye yazo yi- uswidi kabhontshisi, umkhiqizo okhona kakhulu ku-gastronomy yezwe lama-Aztec. Yenziwe ngobisi, izikhupha zamaqanda, isinamoni, ushukela, ama-alimondi achotshoziwe, ama-walnuts kanye ne-cornstarch, ngaphezu kwalokho, ngokunengqondo okuvela kubhontshisi okuphekwe ngaphandle kasawoti.
Kepha futhi zithandwa kakhulu ama-levers, uhlobo lwekhekhe eliphekwe ngamanzi, uju, amakinati angenasawoti nebhotela. Singakutshela okufanayo mayelana i-sapote emnyama, Isisekelo saso siyizithelo zalokhu okubizwa ngokuthi isihlahla futhi okuhambisana namaqanda, isinamoni noshukela phakathi kwezinye izithako. Ukunambitheka kwayo kunelukuluku kakhulu, ngokumangazayo kuyafana noshokoledi. Ekugcineni, sincoma ukuthi isinkwa sombila noma ummbila omusha esikhwameni. Ukulenza libe mnandi, linobisi nesinamoni olujiyile kanye nezinye izithako ezifana namaqanda, ibhotela nofulawa. Imnandi nje.
Ekuphetheni, sikutshele ngezitsha eziyisikhombisa ezenza ukugqama kwe- ukudla okujwayelekile eMexico. Noma kunjalo, besingafaka abanye abanjengo- isobho likalamula, abantu abadumile tamales, the ama-tortilla chips noma i emabhebhana. Qhubeka uzame!
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » América » I-México » Izitsha ezi-7 ezijwayelekile zaseMexico okufanele uzame